सामान्यतया लागू मेकअप धेरै समय बिताए। यो विशेष गरी साँचो हो काजल को। तपाईं लम्बाइ, मात्रा र राम्रो अलग प्राप्त गर्न अनमोल मिनेट को धेरै गुमाउन छ फिट गर्दैन एक उपकरण चयन। तर कम्पनी "Oriflame" यो समस्या हल भएको छ। त्यो एक पूर्ण नवीन उत्पादन, आधुनिक fashionistas सबै आवश्यकताहरू पूरा जो आविष्कार। यो "Oriflame" कम्पनी एक अद्वितीय उपकरण - मसी "5 1 मा"।
यस विशेष उत्पादन किन रोज्ने?
काजल कुनै पनि महिलाको पर्स मा उपस्थित हुनुपर्छ। एक स्वरमा व्यावसायिक बनाउन-अप कलाकारहरूको सही बनाउन-अप को गोप्य आँखा हो भन्छन्। ठीक तिनीहरूलाई चयन, एक महिला पूर्ण यसको उपस्थिति परिवर्तन र उनको आँखा languid र मोहक भयो।
तर, सबै महिला कुनै दोष नभएको lashes लम्बाइ र घनत्व घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आँखा expressiveness दिन केही उपकरण टिप्न छ। तर तपाईं कम्पनी "Oriflame" उत्पादन ( "5 1 मा" मसी) चयन भने, सबै समस्या एक जादू ब्रश को एक लहर संग हल गरिनेछ।
यो अचम्मको उपकरण आधुनिक महिला लागि अपरिहार्य उपकरण भएको छ। रंग चाँडै र सजिलै लागू छ, र परिणाम सबै आशा बढी छ। तत्काल परिवर्तन Lashes, लामो बाक्लो र फ्लफी हुन्छन्। जब काजल लागू गांठ फारम छैन, र हरेक कपाल पूर्ण विभाजित र दाग।
अद्वितीय ब्रश को गोप्य
काजल विकासकर्ताहरूले धेरै कार्यहरु जोडती एक उत्पादन सिर्जना गर्न प्रयास धेरै राखे। यो एक अद्वितीय 3D-ब्रश तपाईं सिद्ध अर्थ लागू गर्न, र प्रत्येक बाल रंग गर्न अनुमति दिन्छ।
एक पक्ष लामो र दुर्लभ, तर अन्य देखि लोचदार सिलिकन ब्रश वृक्ष - छोटो र बाक्लो छन्। यो सुविधा सम्भव पहिलो काजल को lashes मा, तिनीहरूलाई मात्रा दिने लागू र त्यसपछि गर्न विभाजित र विस्तार बनाउँछ।
को ब्रश लागू गर्दा सम्भव काजल को मात्रा नियन्त्रण गर्न बनाउँछ कि एक खास गुलाबी रंग छ। बारी मा, रंग को प्रकटीकरण समाप्त मतलब महिला, पहिचान गर्न मद्दत गर्छ र यो नयाँ बोतल किन्न समय छ।
शानदार प्रभाव काजल
यो हालतमा "Oriflejm" को सबै भन्दा चिन्न र लोकप्रिय उत्पादन हो। काजल "5 1 मा" सिद्ध बनाउन-अप लागि सबै आवश्यक गुणहरू, हरेक स्त्रीको जो सपना छ।
यसको indisputable लाभ बीचमा समावेश:
को परेलाहरु, 61% को अधिकतम बढाव;
55% द्वारा झुकन, को सही सिमुलेशन;
प्रत्येक बाल र सुझाव, 98% द्वारा गर्न सही staining को सही विभाजन;
गांठ बिना चिटिक्क र चिल्लो कोटिंग;
अतिरिक्त हेरविचार र परेला खाना।
तपाईं स्पष्ट लागू काजल "Oriflame" पछि हेर्नुहोस् को अचम्मको सौन्दर्य मा देख्न सक्नुहुन्छ। शानदार lashes फोटो तल देखाइएको छ।
कि लास को भाग हो?
बिल्कुल सबै "Oriflame" कस्मेटिक्स प्राकृतिक सामाग्री बनेको छ। विशेष ध्यान गुणस्तर र hypoallergenic उत्पादनहरु भुक्तान छ।
"5 मा 1" लास मुख्य घटक हो:
चामल चोकर देखि निकाल्न;
समर्थक-भिटामिन B5 तिनीहरूलाई बलियो बनाउँछ र टूटना रोक्छ रूपमा तेल, lashes लचीलापन र लगातार शक्ति प्रदान गर्दछ। बहुमूल्य रोगन carnauba मोम एक रेशमी परेलाहरु, साथै चिस्यान गर्न थप प्रतिरोध प्रदान। बनाउन-अप SPOILED हुनेछैन - काजल पनरोक छैन हुनत, यो एक मामूली वर्षा को डर हुन सक्दैन।
कस्मेटिक्स "Oriflame" - मात्र होइन हेरविचार, तर पनि हानिकारक पर्यावरण कारक को प्रभाव बाट सावधान सुरक्षा हो। चामल चोकर को एक विशेष निकाल्ने प्रत्यक्ष सूर्यका को प्रवेश र पराबैंगनी विकिरण को हानिकारक प्रभाव विरुद्ध lashes सुरक्षित राख्दछ।
विस्तार गर्न ध्यान
कम्पनी "Oriflame" हालतमा (मसी "5 1 मा") को धेरै महिलाहरु प्रेम अहिले नयाँ, आकर्षक बोतल मा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको वर्ग आकार एक राउन्ड, अधिक सिद्ध बदलिएको छ। संशोधन गर्ने लास को संरचना मा भयो छ - निर्माताहरु expressive रुप र कुनै दोष नभएको आवेदन सिर्जना गर्न उनको गुणस्तर सुधार भएको छ। एक ब्रश अपरिवर्तित रह्यो।
कालो र खैरो - बनाउन-अप विभिन्न प्रकारका सिर्जना गर्न, त्यहाँ काजल दुई रंग हो। तपाईं एक उज्यालो बनाउन-अप सिर्जना गर्न खेलकुद भने, तपाईं lashes हाइलाइट गर्न आवश्यक छ। यो सही कालो काजल लागि। लामो मोटा lashes, unbuttoned नजर, जोड र expressiveness - यो उपकरण प्रयोग, तपाईं बस यस्तो आश्चर्यजनक परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
खैरो काजल छाया अब एक बनाउन-अप दिन सिर्जना गर्न उपयुक्त र प्रकाश आँखा लागि आदर्श छ। यसलाई खडा गर्न, तर तेज र रोमाञ्चक हेर्न के धेरै छैन।
दिन मेकअप राम्रो छ लागि काजल को धेरै पत्रहरु लागू गर्न - यो नजर कठिन देखिन्छ हुनेछ। केवल एक आवेदन, र आफ्नो मेकअप, ताजा पूरा भएको छ। एक विशेष साँझ मेकअप लागि, तपाईंले आफ्नो lashes प्रभाव दिन काजल को 2-3 तहहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ "उपरि।" तसर्थ, आवेदन प्रविधी:
चरण 1: बिस्तारै परेलाहरु सम्पूर्ण लम्बाइ साथ छोटो फाइबर संग ब्रश स्लाइड गर्नुहोस्। कुना, inconspicuous hairs बारे मा भूल छैन। ब्रश आफ्नो आकार, एक सानो ट्वीक सिमुलेट र आधार उठाउनु हुनेछ।
चरण 2: ब्रश गर्नुहोस् र अब फाइबर संग lashes अन्य पक्षमा खर्च गर्न जारी। धेरै हलचल - र तपाईंले आश्चर्यजनक प्रभाव देख्नुहुनेछ। परेलाहरु मात्रा अविश्वसनीय लम्बाइ र सिद्ध अलग प्राप्त।
जादू अचम्मको काजल "Oriflame": समीक्षाएँ दुकानदारों
आँखा लागि कस्मेटिक उत्पादनहरु को एक महान विविधता प्रतिनिधित्व कम्पनीहरु को सूची। अनुसार एक महिला र अपेक्षित प्रभाव को उपस्थिति संग थोक छुट्टाएर, पानी प्रतिरोधी वा lengthening काजल खरिद गर्न सकिन्छ।
"Oriflame" को उत्पादन नजिक ध्यान गर्ने चश्मा वा सम्पर्क लेंस लगाउने महिला भुक्तान गर्नुपर्छ। त्यहाँ संवेदनशील आँखा को लागि, जलन पैदा जो गर्दैन र सुनिंनु को जोखिम समाप्त विशेष काजल छ।
"Oriflame" प्रशंसक कस्मेटिक्स को राय मा, हाल सम्म, यो लोकप्रिय थियो, यो कम्पनी काजल। तिनीहरूले भारी ब्रश नराम्ररी lashes दाग र चाँडै बौछार थियो। तथापि, शवहरुको "5 1 मा" को उपस्थिति मौलिक आफ्नो राय परिवर्तन भएको छ।
तत्काल मात्रा, निरपेक्ष लम्बाइ र सिद्ध अलग - यो जादुई हालतमा प्रयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ। एक राम्रो सुविधा लास को लागत थियो। यसको मूल्य 200 rubles, जो विभिन्न आय स्तर संग दुकानदारों यो अचम्मको उपकरण को उत्कृष्ट गुणस्तर रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ।
सनस्क्रीन: स्वास्थ्य गर्न हानि बिना सुन्दर तन
«Givenchy पोख्नुहोस् Homme निलो लेबल» - वास्तविक मानिसहरू लागि खुशबू
Eau डे "Eklat" - आफ्नो सफलता प्रमुख
को भित्री पूरक एउटा तरिका रूपमा ग्लास को पर्खालहरु
Chiara Mastroianni: अभिनेत्री को एक जीवनी र सिनेमा मा उनको सफलताको
एक टाई क्लिप छनौट
ठूलो पैंदा: एक समस्या वा एक लक्जरी?
यो श्रृंखला "सेन्ट पीटर्सबर्ग रहस्य": अभिनेताहरु मानव सद्गुण र भरिएको यो मा embodied छ
कार्ड मनोरञ्जन रूपमा ग्रीस बलौटे समुद्र तट
सारांश: Platonov "FRO", उत्पादन विश्लेषण
दन्त सेवा - प्रकार र मूल्यहरू